Filtrer les éléments par date : jeudi, 04 mars 2021
jeudi, 04 mars 2021 20:59
Pilo kely : Za tsy gaga
Nampiasainao Rajaonarimampianina andakana an'i Ravalomanana, azon'i Rajaonarimampanina ny fahefany dia nodakany ianao.
Nampiasainao indray Ravalomanana, deputé 73, andakana an'i Rajaonarimampianina, azonao indray ny fahefana article 54 napetrakao ny PM Ntsay Chritsian sy ny Ministre interieur ampandresy anao présidentiel, députation, maire ary sénat.
Dia ho gaga ve ianao raha hiaraka Ravalomanana sy Rajaonarimampianina andaka anao ?
Fa izay foana moa no eto, mihavana raha misy tiana harodana.
jeudi, 04 mars 2021 20:31
Befelatanana : Nesorina tsy ho tale ny Pr Mamy Randria
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka dia voatendry ho Tale misahana ny « Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana » Ramatoa RAHARIVELO Adeline.
Natsahatra amin'ny asany arak'izany ny Pr Mamy Randria.
Hita farany teny amin'ny fitokanan'ny Filoham-pirenena ny radiothérapie an'ny HJRA izay ao Befelatanana ity tale ity.
Anisan'ireo mpitsabo niatrika ny Covid-19 ity talen'ny Hopitaly Befelatanana ity.
jeudi, 04 mars 2021 20:15
Morarano Gara : Olona 15 indray voatana am-ponja vonjimaika
Mitaky ny hamoahana ny sasany amin’ny olona miisa 15, izay voatana am-ponja vonjimaika any Moramanga nanomboka ny herinandro lasa teo ny havany.
Manizingizina ihany koa ny mponina mahalala fa madio sy tsy nanao na inona na inona ny sasany amin’ireo olona ireo.
Vokatry ny endrikendrika sy noho ny anarana mitovy dia sinambotra sy voatana am-ponja vonjimaika izy ireny, araka ny re ombieny ombieny.
Avy amin’ny tanàna samihafa ao anatin’ny kaominina ambanivohitr’i Morarano Gara, Moramanga, ireo olona ireo.
Voafaoka hatramin’ny mpimasy mpitaiza olona amin’ny alalan’ny fomba nentim-paharazana.
Ampangaina ho tompon’antoka amin’ny halatra miverimberina mitranga ao amin’ny orinasa sinoa CGC mpanamboatra ny ampahan-dalana RN44 Marovoay Gara-Amboasary Gara (40 km) izy ireo.
jeudi, 04 mars 2021 20:07
Ampamakiambato - Mampikony II : Dahalo roa maty tao anaty fifanjevoana, tafaverina ireo omby halatra
Teo ampisafoana kizo ny Fokonolona ny 01 mars 2021 tamin’ny 04 Ora maraina no nahatsikaritra dian'omby nampiahiahy tao Ampamakiambato Fokontany Amparihimanonga, Kaominina ambanivohitra Mampikony II, Distrika Mampikony, ka avy hatrany dia nanao ny fanarahan-dia.
Nampandre ny Fokonolona manodidina izy ireo sady niantso ny Zandary ao amin’ny Brigady Mampikony.
Ora telo taorian’izay dia nifanena tamin’ny ireo dahalo miisa efatra tsy lavitry ny toerana voalaza etsy ambony ny mpanara-dia ka raikitra ny fifanjevoana.
jeudi, 04 mars 2021 20:03
4 mars : Journée mondiale de l'obésité.
4 mars : Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle.
Filohan’ny oniversiten’i Toamasina : Nesorina tamin’ny toerany Atoa Zafitody Conscient
Nofoanana nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao tao amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny alarobia 03 martsa 2021, araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tSiansa ny ampahany amin’ny didim-panjakana laharana faha 2019-711 tamin’ny 10 aprily 2019 nametrahana ireo Filohan’ny Oniversite ho an’izay mahakasika ny fanendrena an’Atoa Zafitody Conscient, ary noraisina ny fametrahana ny « Comité intérimaire à l’Université de Toamasina ».
Araka ny fampitam-baovao nataon’ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika dia noho ny fisian’ny fitantanana tsy mazava, ny tsy fifehezana ny Oniversite araka ny voalazan’ny didy aman-dalàna mifehy ny Oniversite voafaritry ny didim-panjakana laharana faha 2002-565 tamin’ny 04 Jolay 2002 nasiam-panovana, sy araka ny didim-panjakana laharana 2010-129 tamin’ny 11 mars 2010, ny didim-panjakana laharana faha 2012-688 tamin’ny jolay 2012 ary ny didim-panjakana laharana 2015-1510 tamin’ny 09 Novambra 2015, ny fanodikodinana ny volan’ny mpianatra ampiasaina amin’ny zavatra hafa, araka ny fanadihadiana nataon’ny tompon’andraikitra, ny fivarotana ny fiaran’ny Oniversite izay mifono fanararaotana, ny tsy fahaizana mitantana eo anivon’ny Oniversite, dia natsahatra tamin’ny asany ny Filohan’ny Oniversiten’i Toamasina.
jeudi, 04 mars 2021 09:24
Fifanintsanana CAN 2022 : Stadium Barikadimy no handray ny lalao ihaonan’ny Barea sy Niger
Hotanterahina ao amin’ny Stadium Barikadimy Toamasina ny lalao miverina eo amin'ny Barea sy Niger amin'ny 30 Martsa izao, tafiditra amin'ny fifanintsanana CAN 2022.
Hanomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny lalao ary teratany Gaboney no hitantana ny lalao.
Ny tsy mbola fahavitan'ny Kianja Barea Mahamasina no hanaovana ny lalao ao Toamasina.
jeudi, 04 mars 2021 08:47
Niafara latabatra boribory hatrany ireo ady lehibe sy krizy rehetra
Io fifampidinihina ihany no fanafody, tsy misy mizara seza na hiaraka hitantana, fa mifanantona midinika.
Fanao amin'ny tany demokratika hatrany rehefa misy zava-dehibe mandalo ny miantso ny ankolafin-kery rehetra ny fitondrana, tsy manary ny hasiny sy ny fahefany izany, fa fahendrena aza izany.
Tsy vahaolana ny fampiasan-kery, ny fiantsiana, mila atsahatra ny fifandirana.
Tanjona tokana, ny ampandroso ny Malagasy sy Madagasikara.
Samy manao ny asa tandrify azy avy eo. Ny mpitondra mihaino sy mitondra ao anatin'ny mangarahara, manatanteraka ny vinany, ny mpanohitra milaza ny heviny, manolotra soso-kevitra sy mitsikera, raha ilaina, anitsiana ny mpitondra